Umthelela ogcwele we-Brexit ohambweni lomhlaba awukezwakali
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Umthelela ogcwele we-Brexit ohambweni lomhlaba awukezwakali
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • emihlanganweni • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
Ngokwezinga elithile, imboni kuze kube manje isiyivimbile inhlamvu ye-Brexit ngoba inkinga ye-Covid yasibekela futhi yabusa obekungaba isizini yokuqala yamaholide enkathi ye-Brexit.
Umthelela ogcwele we-Brexit embonini yezokuvakasha yomhlaba wonke awukakazwakala, uveza ucwaningo olukhishwe namuhla (ngoMsombuluko 1 November) yi-WTM London.
Ochwepheshe abangaba ngu-700 abavela emhlabeni wonke baba nesandla kuMbiko Wemboni ye-WTM, futhi babuzwa ukuthi ngabe ibhizinisi labo belike lazizwa yini izingcindezi ezithile ezihlobene ne-Brexit, kuze kube manje.
Cishe uhhafu (45%) uthe bebengawuboni umehluko ngo-2021 ngenxa yeBrexit. Kulabo abavume umphumela we-Brexit, impendulo ibingeyinhle ngokwedlulele. Bangu-8% kuphela abaphawule umthelela omuhle uma kuqhathaniswa nama-24% agqamisa okungekuhle.
Ibhalansi, emele oyedwa kwabane (23%) womkhakha, bebengaqiniseki noma bengazi ukuthi i-Brexit ibe nomthelela kangakanani ekusebenzeni kwabo ngo-2021.
I-UK yashiya ngokusemthethweni i-European Union, nesivumelwano sohwebo, ekupheleni kuka-2020. Indatshana ku-Financial Times kuleli hlobo igqamise ubunzima bokuhlukanisa umthelela we-Brexit kanye nomthelela we-COVID ku-UK plc nasezimbonini ezithile, ithi “ isithombe kwezohwebo nokuqashwa sigcwaliswe umthelela wezomnotho wobhubhane lweCovid-19.”
Isivumelwano sohwebo sase-UK/EU sesivele siholele ezinguqukweni ezithile zokulawula ezizoba nomthelela ekuhambeni okungenayo nokuphumayo phakathi kwe-UK namazwe angamalungu asele. Iningi labasebenzi bomakhalekhukhwini abakhulu base-UK bamemezele ukuphela kokuzulazula ngaphandle kwenkokhiso kubahambi, njengoba kwakudingekile ngokomthetho ngenkathi i-UK iyingxenye ye-EU. Lolu shintsho luzongeza ezindlekweni zohambo kwabaningi futhi kulimaze okuhlangenwe nakho kwendawo oya kuyo kwabanye.
Izinkinga ezingaba khona mayelana nezinsuku zokuphelelwa yisikhathi kwamaphasiphothi, amalayisense okushayela, umshwalense, amazinga abasebenzi ezindaweni zokungcebeleka, izintambo zokuthuthela kwelinye izwe ezikhumulweni zezindiza, nokunye, kungenzeka ziqhubeke kuze kube unyaka ozayo, kanye nezindaba ezihlobene ne-COVID-19.
Kuzophinde kube nomthelela ohlangene we-Brexit/Covid emabhizinisini nakubathengi. Ukuqashwa kwabasebenzi kuzohluka, kuyilapho ubunzima buhlala buzungeze intela yemingcele, ukubuyiselwa kwemali, ukugcwaliseka nokubalwa kwezimali.